Waxaan u falanqeyneynaa kamaradaha amniga ee gudaha iyo dibedda | Wararka IPhone
Imaatinka aaladaha isku xiran iyo otomaatiga guriga ayaa sameeynaya sameynta nidaam ilaalin oo gurigaaga ah oo qof walba gaari karo. Soo hel qalabkaaga oo aadan ku xirnayn shirkadaha ka qaada ajuurada bil kasta sare Wixii aad adigu xakameyn karto naftaada, waa ikhtiyaar ay sii kordhayaan adeegsadayaashu, qiimayaashuna si isa soo taraysa ayey u tartamayaan.
Waxaan falanqeyneynaa maanta laba kamaradood oo ka samaysan nooca 'Yi' oo noqday mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan xagga qiimaha iyo waxqabadka inaad dejiso nidaamkaaga kormeerka guriga. Deegaankaaga xagaaga, goobtaada shaqada ama gurigaaga caadiga ah, goobkasta waxaa sifiican loogu dabooli doonaa kamaradahan gudaha iyo dibaddaba ee aan tijaabinay kuna soo bandhignay fiidiyowga iyo falanqeyntan.
1 Qodobbada muhiimka ah markaad dooranayso
3 Codsi si fiican loo sameeyay
4 Kaydinta deegaanka ama daruuraha
Qodobbada muhiimka ah markaad dooranayso
Markaad rabto inaad dejiso nidaamkaaga kormeerka, waa inaad si cad uga muuqataa qodobbada qaarkood ee muhiimka u ah inaad iska ilaaliso inaad qaaddo tallaabooyin been abuur ah. Midka koowaad ee iyaga ka mid ahi waa in loo isticmaalo isla madal dhammaan aaladahaaga. Cilladaha waaweyn ee HomeKit ay bixiso markay tahay maareynta iyo xakameynta kaamirooyinka ilaalada dariiqa kaliya ee looga bixi karaa waa in lagu kalsoonaado isla astaanta in ay awoodaan in ay kaamirooyinka ka adeegsadaan isla dalabka isla markaana, halka ay ku haboon tahay, isla rukunka. Waa wax waalan in la helo codsiyo dhowr ah oo loogu talagalay kamaradaha kala duwan, sidaas darteed qodobkaan ayaa u muuqda mid lama huraan ah marka la go'aaminayo.
Natiijada dhibicdan koowaad ayaa imaanaysa tan labaad: sumadda aan dooranayno waa inay lahaataa buugga hage ku filan oo qalab si ay ula qabsadaan waxa aan u baahan nahay. Kaamirooyinka gudaha iyo dibadda, oo lagu dhejinayo saqafka, derbiyada ama alaabta guriga, iyadoo leh tayada muuqaalka aan dooneyno iyo astaamaha aan dalbaneyno, sida aragtida habeenkii ama digniinta dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale duubista otomatiga ah. Ma sahlana in la helo noocyo buuxiya dhammaan shuruudahaan, maaddaama qaarkood ay leeyihiin dhowr moodel oo keliya, ama xitaa mid keliya, oo munaasabado badan ku habboon in gudaha la dhigo, ama aan si toos ah uga soo lalmi karin gidaar ama saqaf.
Qodobka saddexaad ee muhiimka ahi waa codsiga aan u adeegsan doonno xakamaynta kamaradaha iyo helitaanka digniinta. Ka dib markii aan isku dayay moodallo iyo noocyo kala duwan waxaan ka helay wax kasta oo ka mid ah codsiyada cajiibka ah iyo kuwa fudud ee loo adeegsado kuwa runta ah ee musiibooyinka leh oo isku wada halleeyey inay runtii caajis tahay in la furo si loo daawado fiidiyoow la duubay. Fudud, toos ah, muuqaal badan leh oo leh ikhtiyaarro qaabeyn cad ayaa ah shuruudaha loo baahan yahay in dalab lagu sameeyo., marka lagu daro u oggolaanshaha helitaanka fog ee dabcan meel kasta oo loo maro taleefannada casriga ah iyo / ama kiniiniga.
Saddexdaan qodob ee muhiimka ah waxaa wehelin kara dhinacyo kale sida nashqadeynta kaamirooyinka, ama haddii aan dooneyno inaan doorbidno habka rukunka ee na siinaya degganaan maskaxeed oo aan ka maqneyn wax fiidiyow ah, ama haddii, liddi ku ah, aynaan dooneynin inaan bixinno wax lacag ah waxaana door bidnay inaan ku keydino cajaladaha kaarka microSD. Sida aad u aragto, waxaa jira qodobo badan oo la tixgelinayo ka hor inta aan la go'aansan astaan ​​si loo abaabulo nidaamkeena kormeerka fiidiyowga. Maxaan ugu go’aansaday dhamaadka kamaradaha nooca Yi? Kadib waad hubin kartaa.
Kaamirada dibedda ee Yi waxay u adkeysan doontaa dhammaan cimilada xun iyadoo aan dhibaato la kulmin, iyadoo la iska caabinayo roobka, qorraxda iyo isbeddelada heerkulka ee caadiga ah ee guriga dibaddiisa. 3 mitir oo xarig ah ayaa kuu ogolaanaya inaad ku xirto guriga haddii loo baahdo, ama u qaado godka banaanka. Duubista 1080p oo leh xagal 110º, aragti habeenkii, ogaanshaha dhaqdhaqaaqa, alaarmiga dhaqdhaqaaqa, makarafoonka iyo sameecadda u oggolaanaysa wada sheekaysiga labada dhinac iyo mashiinka microSD oo leh awood ilaa 32GB ah oo loogu talagalay kaydinta fiidiyowga maxalliga ah. Kordhinta darbiga ee kamaraddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad rogto oo aad dhigto meesha ugu habboon ee aad ku yeelan karto aragtida ugu ballaaran ee suurtogalka ah.
Kaamirada Gudaha ee 'Dome 1080p' waxay aad ugu egtahay astaamaha, laakiin waxaa ka maqan boodhka iyo u adkaysiga biyaha moodeelka kale iyadoo lagu beddelayo faa'iidooyin kale. Xallinta 1080p, aragtida habeenka, 112º xagal-daawashada iyo mootada kaamerada ka dhigaysa inay isku-rogto 345º oo siman iyo 115º oo toosan, taasoo kuu oggolaanaysa inaad ku dhowaad 360º daboosho qolka aad dhigato. Mashiinka ayaa u oggolaanaya inuu raaco dhaqdhaqaaqa si toos ah loo ogaado, aad u faa'iido badan in taxanaha oo dhan la duubo. Waxa kale oo ku jira booska microSD ee gaadhaya 32GB, kiiskanna fiilada microUSB waa la saari karaa, taas oo aan ahayn kiiska kamaradda dibedda. Naqshadeedu waxay u oggolaaneysaa in lagu dhejiyo saqafka, derbiga ama dusha sare. In kasta oo aysan dhawaaqyada ogeysiin, haddana waxay sidaas sameysaa markii aad u maleyso inuu yahay ilmo ooyaya, sidaas darteed xitaa waxaa loo isticmaali karaa in lagula socdo kan yar ee guriga ku jira.
Codsi si fiican loo sameeyay
Cunsurka aasaasiga ah ee ka dhigi kara wax soo saarka ugu fiican waxtar la'aan waa dalabka. Xaaladdan oo kale waxaan ka horreynaa geedaha bakoorad wanaagsan iyo adeegsi wanaagsan. Sidii aan ku sheegay bilowgii, waa muuqaal, toos ah oo fudud, iyada oo aan wax dheeraad ah laga buuxin. Fursadaha qaabeynta ayaa cad oo ay gaari karaan qof kasta oo aqoonta ugu yar u leh waxa ay tahay isticmaalka taleefannada casriga ah. Ogeysiisyadu waxay si toos ah kuugu geynayaan taxane gaaban oo dhaqdhaqaaqa la ogaadey, kaas oo haddii aad rabto goor dambe aad ku ballaarin karto taxane dheer oo ku kaydsan kaarka deegaanka ama daruuraha.
Dhammaan kaamirooyinka ayaa ka soo muuqan doona shaashadda weyn, isla markaana in la arko nolosha mid kasta oo ka mid ah waxaa lagu gaarayaa iyada oo la gujiyo, iyada oo aan wax kale laga sii yeerin. Ogeysiisyadu waxay leeyihiin tab iyaga u gaar ah, oo aad ka wada arki karto dhammaantood, ama dooro kaliya kuwa kamarad gaar ah. Dejinta waxaa loo qaabeeyey mid kasta oo kaamirooyinka ka socda arjiga ah, iyo labadaba astaantaada iyo koontadaada keydinta daruuraha waa la maamuli karaa oo laga bixin karaa. Ma jiraan wax aanad ka qaban karin dalabka, iyo waliba qaab fudud oo muuqaal ah.
Waxaa jira kaliya hal cilladood, oo waliba la hagaajin karo oo aan rajeynayo inay dhaqso u fulin doonaan: ogeysiisyada ku saleysan goobta. Waqtigan xaadirka ah haddii aad rabto inaan joojiyo ku wargalintaada, waa inaad si toos ah u damisaa kamaradda ama aad u joojiso ogeysiisyada Haddii aad ka tagto guriga oo aad rabto in lagu wargeliyo mar kale, waa inaad dhaqaajisaa ogeysiisyada. Waa wax aad u adag oo si fudud loo xallin karo, dhab ahaantii waxaa jira codsiyo kale oo horay uga yimid noocyo kale oo iyaga sameeya, haddii aad guriga joogtona waxaad fursad u leedahay inaad si otomaatig ah u joojiso ogeysiisyada, kuwaas oo si otomaatig ah loo hawlgeliyo markaad ka baxdo guriga. Haa, waad dejin kartaa saacado hawlgal, laakiin goobta waxay ila tahay inay tahay yaraansho muhiim ah.. Waxaa laga yaabaa in midka kaliya ee muhiimka ah ee barnaamij si kale loo sameeyay si kale loo sameeyay. Aqoonsiga dadka iyo duunyada ama walxaha kale waa wax aan waligey wax weyn iiga taraynin, marka ma seego.
Kaydinta deegaanka ama daruuraha
Had iyo jeer waa faa'iido in la doorto dhowr dariiqo oo kale iyada oo aan lagu qasbin hal ikhtiyaar, xaaladdanna waxaan nasiib u helnay inaad awood u leedahay inaad kala doorato daruur kaydisa oo kaa qaadaysa walwalkaaga iyadoo lagu beddelayo lacag bille ah oo la awoodi karo, ama kaydinta maxalliga ah si aysan u bixin nooc kasta oo khidmad ah, si kasta oo ay u yar tahayba.
Yi Cloud waa adeegga kaydinta daruurta ee ay bixiso astaanta, iyo qiimaha u dhexeeya € 2 bishiiba ama € 20 sanadkii Waxaan haysan karnaa fiidiyowyadeena in lagu kaydiyo daruurahaaga walwal la'aan. Waxay kuxirantahay tirada maalmaha aan rabno inaan keydino iyo kamaradaha aan hayno, qiimayaashu way kala duwan yihiin, waxaad ka arki kartaa xulashooyinka kala duwan shabakada soo saaraha (isku xirka).
Xulashada keydinta ee maxalliga ah haddii aynaan rabin inay bixiso nooc kasta oo khidmad ah ayaa ku habboon kuwa aan doonayn inay fiidiyowyadoodu ku jiraan server kasta. Nooc kasta oo kaar microSD ah 10 wixii ka dambeeya iyo illaa 32GB FAT32 ayaa kaamirooyinka u shaqeyn doona. In kasta oo Kaamirada Yi Dome 1080p ay leedahay booska microSD ee gadaal laga arki karo, kamaradda banaanka waa inaan ka saarnaa daboolka yar ee hoose iyadoo laga furayo boolal yar yar iyadoo loo mahadcelinayo darawalka kujira sanduuqa. Kaarka waxaa laga soo qaabeyn karaa arjiga laftiisa adoo galaya kaamirada su'aasha ku jirta.
Kamaradaha Yi Dome 1080p iyo Yi Outdoor waxay na siinayaan astaamo isku mid ah kamaradaha kale ee leh qiime aad u sareeya, oo ay ku jiraan duubista FullHD, aragtida habeenka, ogeysiisyada dhaqdhaqaaqa iyo xitaa la socoshada dhaqdhaqaaqa kiiska Dome-ga gudaha. Si ka duwan noocyada kale, kaamirooyinkani waxay na siinayaan suurtagalnimada isticmaalka kaydinta daruuraha qiimo aad u jaban (laga bilaabo € 20 sanadkiiba) ama kan awood u leedahay inaad ku keydiso fiidiyowyada kaararka microSD, adigoon kala duwneyn astaamaha inta udhaxeysa hal ikhtiyaar iyo mid kale. Intaa waxaa dheer, codsigeeda si aad u wanaagsan ayaa loo qaabeeyey waana mid aad u fudud in la isticmaalo. Waxaas oo dhan, waxay noogu muuqdaan mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan ee qiimaha iyo waxqabadka haddii aan rabno inaan gurigayaga ka samayno nidaam ilaalin fiidiyow ah. Kaamirooyinka waxaa laga heli karaa Amazon xiriiriyaasha soo socda:
Yi Dome 1080p (€ 59,99)
Kaamirada Dibadda ((64,99)
Waxaan la xiriirnay soo saaraha, waxayna noo soo bandhigeen kuuboon qiimo jaban oo loogu talagalay akhristayaashayada oo ansax noqon doona oo kaliya illaa Agoosto 7 (Yi Dome) iyo August 9 (Kaamirada Bannaanka) 2018 oo aad ku keydin doontid xoogaa yuuro ah. Wixii su'aalo ah waxaad ka heli kartaa boggooda Facebook (isku xirka)
Yi Dome 1080p leh kuubanka YIDOMOYI wuu dhaafayaa laga bilaabo € 59,99 ilaa 44,99€
Kaamirada Bannaanka Yi la coupon OUTDOOR2 maraa laga bilaabo € 79,99 ilaa € 64,99
Kaamirooyinka amniga ee Yi
Moodooyin kala duwan oo loogu talagalay goobo kala duwan
Kaydinta deegaanka ama daruuraha, doorashada adigaa iska leh
FullHD 1080p oo leh aragti habeen iyo dareemayaal dhaqdhaqaaq
Qiimo aad u xiiso badan oo leh waxqabad sare
Qiimaha keydinta daruuraha oo aad u hooseeya
Codsi si fiican loo qaabeeyey oo si fudud loo isticmaali karo
Ma jiraan ogeysiisyo ku saleysan goobta
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Waxaan u falanqeyneynaa kamaradaha amniga Yi ee gudaha iyo dibedda
Waad salaaman tahay Luis.
Marka hore waan kugu hambalyeynayaa maqaalka iyo muuqaalka.
Waxaan ku haystaa kamaradan guriga dhexdiisa waxna waxay ka dhacayaan App-ka aan arkay ee aad adigu ku leedahay iyo kuwayga macquul maahan. Waxaan haystaa nooca iPhone-ka sidaada oo kale.
Qeybta hoose ee shaashadda weyn ee barnaamijka, waxaan ku arkaa seddex ikhtiyaar adiguna afar. Midka aan iiga muuqan waa midka lagu calaamadeeyay xiddig (ugu cadcad). Waxaan ula jeedaa, kama badbaadin karo dhibcaha aan ku jeclaado kamaradayda. Ma ogtahay sababta ay noqon karto?
Ku jawaab Juan Francisco
Hagaag, ma aqaan hubaashii ... Ma waxay noqon kartaa maxaa yeelay ma haysatid kaydinta daruuraha? Waan hayaa
Kuuboonku wuxuu leeyahay ma ansax yahay ... Uguyaraan YIDOMOYI. Ma ogtahay sababta?
Waxaan la xiriiray soo saaraha, rasiidhadu waxay shaqeynayaan laga bilaabo 15:00. Waan ka xumahay dhibka.
Aad durba firfircoon tahay
Haa, waxaan ku keydisaa qolal ka mid ah.
Waan yara xanaaqsanahay arintaan.
Hagaag, ma ogi ... Ma aanan sameyn wax aan ku muujiyo. Waan ka xumahay
Ma awoodo inaan arko rasiidhada dhimista
Waxaad ku haysataa dhammaadka maqaalka
Maqaal wanaagsan. Waxaan bilaabay sanado ka hor kamaradahaan markii ay la joogeen Xiaomi, kaliya waxay ka iibiyeen kuwa Shiinaha waxyar ka dib markii ay iibiyeen International Version. Waxaan haystaa Kaamiro Shiineys ah iyo mid caalami ah waana ku faraxsanahay, intaas ka sokow, waxaan sidoo kale leeyahay qaylo-dhaanta Xiaimi waxayna u eg tahay kamaradda, wanaagsan, qurux iyo raqiis
Porcierto oo ku taal Aliexpres qaar ka mid ah iibiyuhu waxay leeyihiin qubbad qiyaastii ah € 36 qiyaastii. Waxaad ka eegi kartaa halkaas si aad u aragto inaad gorgortan qaadatay.
Kaamirooyinteyda ayaa ah kamaradda gudaha waxaana rabaa inaan dhowaan ku ballaariyo qubbad. Haddii aad carruur leedahay, waxay u yimaadaan si raaxo leh adiga oo daawanaya carruurta
Ma u baahan yihiin in lagu xiro shabakad Wi-Fi ah si ay u shaqeeyaan? Haddii xulashada keydka daruuriga la doorto waa iska cadahay, laakiin SD? Waa la qaabeyn karaa iyada oo aan la dhigin iyo waxa ku keydsan kaarka? Waana suurtagal in xiriir toos ah laga sameeyo taleefannada gacanta iyo kamaradaha iyada oo loo marayo wifi ay iyadu abuurtay, sida 'Yi Action'? Waxay ila egtahay wax aasaasi ah inaan ogaado waxyaalahan, maadaama kamarada banaanka 90% waqtiga aysan yeelan doonin xiriir internet ...
Koodhka xayeysiinta ee aad cayimay laguma dabaqi karo iibsigan.
Kani waa ii yimaadaa markaan rabo inaan iibsado Yi-ga banaanka
Waxaan ku iibsaday mid ka mid ah amazon prime for 25, waa xero weyn, aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan ilmahayga kala socda iphone-ka ilaa barnaamijka oo aad u dhameystiran
Waad salaaman tahay Luis Padilla, lambarka xayeysiinta ee banaanka Yi wuxuu ansax yahay ilaa 9-ka Ogosto MA shaqeynayo, ma ogtahay waxa dhibaatadu noqon karto ??? Mahadsanid
Jawaab Daniel Rodriguez Jimenez
Kaliya waxaan arkaa dhibaato kadib markaan iibsado, inay ubaahantahay fiilo banaanka ka baxsan oo aanan badanaa haysan. Awoodda korontaduna waa isku xirnaanta dibadda iyo USB-ga, taas oo ay tahay inaad ku sameysid ikhtiraac si aad u awood u yeelatid, waa inaan ka soo qaataa fiilo kale laambadaha bannaanka oo aan dhigaa fiilooyin USB ah oo qatar u ah kamarad ka koobnaan laheyd gudaha. Oo markaa si looga awoodo in looga quudiyo barta iftiinka ee guriga. Isku xiraha USB wuxuu bixiyaa dhibaatooyin.
Afar milyan oo isticmaale ayaa iskudayaya beta-ka dadweynaha ee macruufka iyo macOS